"Amazambane amaZolsky". Ukukhulisa amazambane endaweni engenagciwane - Bhala i- "Potato System"
"Amazambane amaZolsky". Ukukhulisa amazambane endaweni engenagciwane
I-LLC "amazambane eZolskiy" yasungulwa ngo-2011, inkampani igxile ekukhuleni amazambane okudla kanye nembewu yemikhiqizo ephezulu.
Umsebenzi wenziwa ezindaweni ezinezintaba nezintaba zeKabardino-Balkarian Republic. Le ndawo ayikhethwanga ngengozi. Ekuphakameni kwamamitha ayi-1000-2000 ngaphezu kolwandle, cishe azikho izinambuzane ezithwala izifo zamazambane ezibangelwa amagciwane. Isizinda esingezansi esithathelwanayo sezindawo eziphakeme sivumela ukusetshenziswa kwe-agrochemistry ngezinga elincane, okwenza imikhiqizo ibe nobungani bemvelo kakhulu.
Kuvunwa amathani ezitshalo angaphezu kwama-200 5 emikhakheni yamahektha angama-000, zombili izinhlobo ezintsha nezivele seziqinisekisiwe nezinhlamvu zamazambane.
Ngesikhathi sokukhula, ongoti benkampani benza ukuhlanzwa okuphindwe kathathu- nokuhlukahlukene, futhi ukuvuna kwenziwa ngesandla. Isivuno esivuniwe sikhethwe ngokucophelela futhi silinganiselwe ngosayizi.
Ngesisekelo senkampani, i-laboratory yokulima ama-minitubers yadalwa. Inesitshalo se-hydro-aerial, esandisa isivuno esiphindwe kayishumi. Ku-2017, ngosizo loMnyango Wezolimo we-KBR, iZolsky Potato LLC yethule i-greenhouse for minitubers ezikhulayo.
Kusukela ngo-2018, "iZolsky Potato" ibibambe iqhaza ekusetshenzisweni kwephrojekthi ebanzi yezesayensi nezobuchwepheshe "Ukukhiqizwa kwamazambane embewu esezingeni eliphakeme ezinhlobonhlobo zasekhaya ezincintisanayo endaweni engenagciwane yendawo enezintaba zeKabardino-Balkarian Republic" (njengengxenye yohlelo olungaphansi "Lokuthuthukiswa kwamazambane nokukhiqiza imbewu eRussian Federation" Uhlelo lobuchwepheshe lokuthuthukiswa kwezolimo ngo-2017-2025). Kanye nabalingani besayensi, inkampani isebenza ekwakhiweni kwezinhlobo ezine ezintsha zamazambane.
Imisebenzi ephambili yenkampani ukuthuthukisa ikhwalithi nokwandisa inani lemikhiqizo ekhulile.
Izinhlobonhlobo Zhukovsky ekuqaleni
Izinhlobonhlobo ze-Red Scarlett
Izinhlelo lezi kuzokwakhiwa isikhungo sembewu esikhulu futhi sithuthukise ukubambisana namazwe angaphandle.
Imininingwane engaphezulu ngemisebenzi yenkampani ingatholakala kuwebhusayithi esemthethweni https://zsk07.ru/ noma kumanethiwekhi omphakathi https://www.instagram.com/zolskiy_kartofel/
Tags: "Amazambane amaZolsky"amazambane akhulaI-Kabardino-Balkaria
Izici zesizini ka-2020. Ukuntuleka kwabasebenzi
Esifundeni saseNovgorod, imiphumela yokuqala yokuqaliswa kwemisebenzi yephrojekthi yesifunda ebaluleke kakhulu "Ukuthuthukiswa kokukhiqizwa kwembewu yamazambane"